ANTANANARIVO : Hoesorina avokoa ireo mpivarotra mibahan-dalana eny Analakely sy ny manodidina
Olana tsy mety voavaha naharitra taona maro ny fivarotana ao anaty arabe teto an-drenivohitra. 14 janvier 2020
Saika feno, tsentsina mpivarotra amoron-dalana izay aleha rehetra, hany ka voaelingelina hatramin’ny lafin’ny fifamoivoizana. Ho fampandrosoana sy fanatsarana ny tanàna eto Antananarivo renivohitra manoloana ny zava-amisy dia anisany nitondra paikady ny teo anivon’ny Polisy miasa ao amin’ny Kaomisarian’ny boriborintany voalohany etsy Analakely. Omaly, nidina ifotony teny amin’ireo faritra feno mpivarotra manodidina an’Analakely sy Tsaralalàna izy ireo . Nampiomanina avy hatrany ny sain’ireo mpivarotra fa tsy maintsy hiala amin’ny toerana mahazatra izay nivarotana ary koa niangaviana mba hanatona ny Kaominina hamantaran’izy ireo toerana vaovao tokony ho azo anaovana ny tsena vaovao indray.
Tsy maintsy noraisina ny fepetra mba hanalefahana ny fitohanan’ny fifamoivoizina lavareny. Etsy andanin’izay , mba voahaja ihany koa ny lalana « trottoir » natao ho an’ny mpandeha an-tongotra. Atao ezaka goavana manomboka izao ny fanabeazana ny mponina ho tia filaminana sy mahay manaja lalàna mifehy ka tsy ho zatra goragora intsony.
Tokony tsy ho hita intsony ireo olona zatra mandika lalàna fa samy hanaiky ny fandaminana apetraka avokoa. Aorian’ity fanentanana notanterahin’ny Polisy ity moa dia tsy maintsy hiroso amin’ny fanalana ireo mpivarotra amoron-dalana iray manontolo ireto farany amin’ny herinandro manaraka izao raha sendra ka mbola mahita.